Ngwa ọhụrụ Malababa maka ọdịda | Bezzia
Maria onyekwere | 09/09/2021 18:00 | Akpa, Emezu, Akpụkpọ ụkwụ
Mgbe anyị matara na anyị esoghị gị kerịta atụmatụ Malababa n'afọ gara aga, anyị chọrọ idozi ya. Kedu? Na -eru nso novelties maka ọdịda nke ụdị mmebe nke ngwa ndị emebere na Spain.
Akpa, akpụkpọ ụkwụ, ọla ... Ngwa Malababa Ha ga -enye gị ohere iji nkwanye ugwu mechaa uwe gị. Ngwa, n'ụzọ, nke a na -egosi n'ụdị agba dị iche iche, nke kamel, acha anụnụ anụnụ, ịgba ọtọ, ihere na oji pụtara. Chọpụta atụmatụ ọhụrụ ha!
3 Ọla ntị
Anyị hụrụ mfe Cata, mitten nwere olu olu, nke ejiri akpụkpọ anụ atụrụ saa mee nke na -egosi mkpuchi anyị. Ihe ọzọ dị mkpa mana nke a sitere n'ike mmụọ nsọ nke nwere olu mechiri emechi na ikiri ụkwụ dị ala bụ Ramona, dịkwa na mkpuchi. Ma ọ bụrụ na ị na -achọ ntakịrị elu, ị nwere ike ịgakwuru Nicolsa maka ụdị kachasị elu nwere ịdị elu ikiri ụkwụ 5,55 cm nke ị nwere ike ịhụ na onyonyo dị n'okpuru na -acha anụnụ anụnụ.
Akpa akpa a kpara akpa ha abụwo ihe e ji mara ụlọ ọrụ ahụ mgbe niile. N'ime nchịkọta ọhụrụ a, anyị na-ahụ ha n'ụdị nwere ikike buru ibu na nke pere mpe na mkpuchi mkpuchi ejiri aka mee. Akpa ịzụ ahịa Odette, nke e sere n'elu, bụ otu n'ime ọkacha mmasị anyị. Arụ ọrụ, sara mbara, mara mma ma dị na agba asaa maka ịhọrọ site na.
Na -achọ nhazi ọzọ dị ịtụnanya? Akpa picnic ga -eme ka ị kwenye mgbe ahụ. Ọ bụ, dị ka nke gara aga, akpa akpịrị akpịrị nwere akpa akpa mana enwere ụfọdụ ihe dịka udi nkata na iberibe ihe ndị e ji eme ya. Ọ dị nha abụọ na agba atọ.
Ebe ọ bụ na m hụrụ Nchịkọta petals Malababa maka oge mbụ, m na -ebi ịhụnanya ya. Ee, m na -ekwupụta. Ọ na -amasị m na ọla ntị ndị a niile nwere obere methacrylate petal motifs nke na -abịa n'ụdị dị iche iche: mkpụmkpụ, ogologo na nghọta na mgbanaka ọla.
Ọ masịrị gị ngwa ọhụrụ Malababa maka ọdịda?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » ejiji » Emezu » Ngwa ọhụrụ Malababa maka ọdịda